Kedu mgbe ikpeazụ ị gbaghaara mmemme email gị iji hụ na e depụtara ndepụta email gị nke ọma na ndị debanyere aha na-enweta ozi ha chọrọ? Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ege ntị naanị na nnukwu ndebanye aha email obere ndepụta email na ọdịnaya ezubere iche mgbe niile karịa mgbasa ozi.
A na-ekewapụta isiokwu ndị ahụ nke ọma ma na-emelite ihe masịrị m bụ naanị otu ịpị. Ọ bụrụ na ịnwere ike ịchọta mmasị ndị debanyere aha maka oge ole ha ga - achọ ịkpọtụrụ - ọ ka mma (dịka ọ na - eme, kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa, nkeji ọnwa ọ bụla). Ọ na - eme ka nrụpụta ọdịnaya siri ike na ịhazi usoro email, mana ndị debanyere aha obi ụtọ!
Mgbe ihichachara ma kewaa ndepụta email gị, ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ ejirila ọnụ ọgụgụ site na ịpị ụba ntụgharị na ntụgharị.